Mareykanka oo Afghanistan u ballan-qaaday gargaar bani'aadaminimo oo cusub
Xaaladda bani'aadamnimo ee dadka Afgaanistaan waa mid aad u xun: 600,000 oo qof, oo barkood ay carruur yihiin, ayaa ku barakacay dagaal iyo cabsi colaadeed; gaajadu waa baahsan tahay, iyadoo in ka badan hal milyan oo carruur ah oo ka yar shan sano ay halis ugu jiraan gaajo; nidaamka daryeelka caafimaadka ayaa burburaya.
Isagoo ka hadlayey kulankii ugu horreeyay ee heerkiisu sareeyo oo ku saabsan xaaladda bini’aadannimo ee Afgaanistaan tan iyo markii ay qabsadeen Taliban, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa yiri, “Dadka Afghanistan waxay u baahan yihiin nolol. Tobannaan sano oo dagaal, rafaad iyo amni -darro ah kadib, waxay la kulmaan malaha saacaddooda ugu halista badan. Hadda waa waqtigii beesha caalamku garab istaagi lahayd. ”
Danjiraha Mareykanka ee Qaramada Midoobay Linda-Thomas Greenfield ayaa shirka u sheegtay “si aan mugdi ku jirin,” in “Mareykanka ay ka go’an tahay bixinta gargaarka bani’aadamnimo iyo taageeridda dadka Afgaanistaan.”
Waxay ku dhawaaqday ku dhawaad $ 64 milyan oo gargaar bani’aadamnimo oo cusub, si loogu qaybiyo Qaramada Midoobay iyo NGO -yada, taas oo wadarta guud ee gargaarka Mareykanka ee reer Afgaanistaan sannad -maaliyadeedkaan gaarsiin doonta $ 330 milyan. “Maaliyaddan,” ayay tiri.
"Waxay gacan ka geysan doontaa bixinta gargaarka cuntada ee nafaha lagu badbaadiyo. Waxay dabooli doontaa baahiyaha caafimaadka iyo nafaqada ee muhiimka ah. Waxay wax ka qaban doontaa welwelka ilaalinta haweenka, carruurta, iyo dadka ka tirsan qowmiyadda, dadka laga tirada badan yahay, iyo kooxaha diimaha kale. Waxayna caawin doontaa carruur badan - oo ay ku jiraan gabdhuhu - inay dib ugu noqdaan dugsiga. Waxayna siin doontaa biyo nadiif ah oo la cabi karo. ”
Danjire Thomas-Greenfield waxay ku adkeysatay in maalgelintaan kaliya ayna ku filleyn in lagu taageero Afgaanistaan iyo dadaallada UN-ka iyo la-hawlgalayaasha NGO-yada. Afgaanistaan waxay kaloo u baahan yihiin dalalka deriska ah inay furaan xuduudaha; shaqaale gargaar oo khibrad leh; ballanqaadyo af iyo qoraalba ah oo ay Daalibaan ka qortay xuquuqda hawlgelinta hay'adaha gargaarka, iyo daaweynta iyo xuquuqda kooxaha laga tirada badan yahay, haweenka, iyo gabdhaha in la ilaaliyo. “Erayada kuma filna,” ayey tiri Ambassador Thomas-Greenfield.
"Waa inaan aragnaa ficil." Waxay wax laga xumaado ku tilmaantay in Taalibaan ay carqaladeyneyso oo ay faragelin ku sameyneyso dadaallada gaarsiinta iyo ilaalinta, oo ay ku jirto in laga mamnuuco shaqaalaha dumarka ah inay badbaadiyaan nolosha, iyo inay fuliyaan aargoosi ka dhan ah dadka qaata iyo kuwa bixiya gargaarka. "Taasi waa wax laga naxo oo aan la aqbali karin," ayay tiri.
“Tani waa daqiiqad ay beesha caalamku ku midoobi karto,” ayey ku dhawaaqday danjire Thomas-Greenfield. “Aan maanta ballan ku qaadno inaan ka soo dhaweynno rafcaankan degdegga ah ee taageero dhaqaale. Ka go'an in aad garab istaagto shaqaalaha samafalka inta ay qabanayaan shaqadooda muhiimka ah oo dhan, iyo in la dardargeliyo hawlaha bani'aadamnimada ee Afgaanistaan si aan u badbaadino nolosha dadka Afgaanistaan ee baahan" ayey tiri.